ပေါင်းစည်းထားသော ဆားကစ်များ- ၎င်းတို့သည် အဘယ်နည်း၊ ပုံနှိပ်ထားသော အရာများနှင့် ခြားနားချက်များ | အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ
ပေါင်းစည်းထားသော ဆားကစ်များ- ၎င်းတို့သည် အဘယ်နည်း၊ ပုံနှိပ်စက်များနှင့် အခြားအရာများနှင့် ကွာခြားချက်များ
ဣဇာက်သည် | | အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများ, ယေဘုယျ
အ ပေါင်းစပ်ထားသော ဆားကစ်များ၊ ချစ်ပ်များ၊ မိုက်ခရိုချစ်ပ်များ၊ IC (ပေါင်းစပ်ပတ်လမ်း) သို့မဟုတ် CI (ပေါင်းစပ်ပတ်လမ်း)သို့မဟုတ် ၎င်းတို့ကို သင်ခေါ်လိုသမျှ၊ ၎င်းတို့သည် နည်းပညာ၏ လက်ရှိအဆင့်အထိ တိုးတက်လာနိုင်စေသော အီလက်ထရွန်းနစ်ဆားကစ် အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤတီထွင်မှုမရှိဘဲ၊ ကွန်ပျူတာနှင့် တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးများသည် ၎င်းတို့သည် မည်သို့မျှမဖြစ်နိုင်ဘဲ၊ အီလက်ထရွန်နစ်နှင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများသည် အလွန်ကွာခြားမည်ဖြစ်သည်။
၎င်းတို့၏အရွယ်အစားသေးငယ်ပြီး နေရာတိုင်းတွင်ရှိနေသော်လည်း ဤပေါင်းစပ်ဆားကစ်များသည် ဖုံးကွယ်ထားသည်။ ရှာဖွေတွေ့ရှိရန် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။. ဤတွင် ဤအရာများအကြောင်း သင်ပိုမိုလေ့လာနိုင်ပါသည်။ အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများ...
1 ပေါင်းစည်းထားသော ဆားကစ်များကား အဘယ်နည်း။
1.3 IC အမျိုးအစားများ
1.4 ပုံနှိပ်ဆားကစ်များနှင့် ကွာခြားချက်များ
2 လူကြိုက်အများဆုံး ပေါင်းစပ်ဆားကစ်များ
ပေါင်းစည်းထားသော ဆားကစ်များကား အဘယ်နည်း။
အ ပေါင်းစည်းထားသော ဆားကစ်များသည် တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးတာ၏ အကွက်များဖြစ်သည်။ ထုပ်ပိုးထားပြီး မှတ်တမ်းတင်ထားသော အီလက်ထရွန်းနစ် ဆားကစ်တစ်ခုပါရှိသည်။ ၎င်းတို့ပိုင်ဆိုင်သည့် ယုတ္တိဗေဒမိသားစုအပေါ် မူတည်၍ ဤဆားကစ်များကို သေးငယ်သော အီလက်ထရွန်နစ်အစိတ်အပိုင်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ၎င်းတို့သည် diodes၊ transistor၊ resistors၊ capacitors စသည်တို့ ဖြစ်နိုင်သည်။
သူတို့ကျေးဇူးကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ခေတ်မီအီလက်ထရွန်းနစ် ကြီးကျယ်သော ပေါင်းစည်းမှုကို သူတို့ခွင့်ပြုပေးသော ခေတ်သစ်တစ်ခု စတင်ပါ။ အမှန်တကယ်တော့၊ ယနေ့ခေတ်အတိုးတက်ဆုံး ချစ်ပ်အချို့သည် မီလီမီတာအနည်းငယ်စတုရန်းမိုင်မျှသာရှိသော သေတ္တာတစ်ခုတွင် ထရန်စစ္စတာ ဘီလီယံပေါင်းများစွာအထိ ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။
အစပိုင်းမှာတော့ အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းတွေကို ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းသုံးလာတယ်။ လေဟာနယ်အဆို့ရှင် သမားရိုးကျ မီးလုံးများနှင့် ဆင်တူသည်။ ဤအဆို့ရှင်များသည် ကြီးမားပြီး အလွန်ထိရောက်မှုမရှိ၊ ၎င်းတို့သည် ပူလာပြီး အလွယ်တကူ ကျိုးသွားသောကြောင့် လွင့်နေသော ကွန်ပျူတာများနှင့် အခြားစက်ပစ္စည်းများ ဆက်လက်လည်ပတ်နေစေရန်အတွက် လွင့်နေသော အရာများကို အစားထိုးရန် လိုအပ်ပါသည်။
En 1947 တွင် transistor ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။အဆို့ရှင်ဟောင်းများကို အစားထိုးကာ အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများကိုလည်း တော်လှန်ပြောင်းလဲစေမည့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူ့အား ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် ၎င်းသည် အဆို့ရှင်များထက် များစွာပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ထိရောက်မှုရှိပြီး ပိုမိုမြန်ဆန်သော Solid State ကိရိယာတစ်ခု ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော် အချို့က ၎င်းတို့သည် ဤဒြပ်စင်အများအပြားကို ဆီလီကွန်ချစ်ပ်တစ်ခုထဲသို့ ပေါင်းစည်းနိုင်သည်ဟု ထင်ကြသည်။ ဤသည်မှာ သမိုင်းတွင် ပထမဆုံးသော ပေါင်းစပ်ဆားကစ်များကို ဖန်တီးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၊ Solid State အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများသည် ပြောင်းလဲလာပြီး အစိတ်အပိုင်းများ၏ အရွယ်အစားကို လျှော့ချပေးသည့်အပြင် ကုန်ကျစရိတ်လည်း သက်သာလာသည်။ 50 ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် Texas Instruments ဟုအမည်ပေးထားသောတူရိယာတီထွင်သူ Jack Kilby၊ မတူညီတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို ရောယှက်နေတဲ့ ဆီမီးကွန်ဒတ်တာ ချစ်ပ်ပြားနဲ့ ဝိုင်ယာကြိုးအချို့ကို ဖန်တီးဖို့ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းသည် သမိုင်းတစ်လျှောက် ပထမဆုံးသော ချစ်ပ်ပြားဖြစ်လာပြီး ၎င်းအတွက် နိုဘယ်လ်ဆုကို ဆက်လက်ရယူသွားမည်ဖြစ်သည်။
ပြိုင်တူနီးပါး၊ Robert Noyceထိုအချိန်တွင် Fairchild Semiconductor ၏ဝန်ထမ်း (နောက်ပိုင်း Intel ၏တည်ထောင်သူတဦး) သည်လည်း အလားတူကိရိယာကို တီထွင်ခဲ့သော်လည်း Kilby's ထက် များစွာသော အားသာချက်များရှိသည်။ Noyce သည် ယနေ့ခေတ် ပေါင်းစည်းထားသော ဆားကစ်များကို ပံ့ပိုးပေးမည့် စိတ်ကူးကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ ဤနည်းပညာကို Planar ဟုခေါ်ပြီး Kilby ၏ mesa နည်းပညာထက် အားသာချက်များရှိသည်။
ထိုအချိန်မှစ၍ မရပ်တန့်သေးပါ။ အဆင့်ဆင့်ဖြစ်ပျက်ခြင်း နှင့်ဤအစိတ်အပိုင်းများ၏တိုးတက်မှု။ လောင်စာဆီချွေတာမှုနှင့် အရွယ်အစားတို့ကြောင့် ကုန်ကျစရိတ်များ ကျဆင်းသွားခဲ့ပြီး စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည် သိသိသာသာ တိုးတက်လာခဲ့သည်။ တခြားဘယ်ကဏ္ဍကမှ ဒီလောက်မတိုးတက်သေးပါဘူး၊ တခြားကဏ္ဍက လူသားတွေအပေါ် ဒီလောက်ကြီးကြီးမားမား သက်ရောက်မှုမရှိခဲ့ဘူး...
၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ပေါင်းစပ်ဆားကစ်များထုတ်လုပ်ခြင်း။ အလွန်ရှုပ်ထွေးသည်။ သို့သော်၊ ဗီဒီယိုတွင်မြင်ရသည့်အတိုင်း၊ ၎င်းကိုလူများနားလည်နိုင်စေရန်အတွက် ၎င်းကိုပိုမိုရိုးရှင်းသောအဆင့်အနည်းငယ်ဖြင့် အကျဉ်းချုံးနိုင်သည်။
ဒီမှာ ငါကြိုးစားမယ်။ ဒီဇိုင်းအဆင့်ဆင့်ကို အကျဉ်းချုပ်ပါ။ ဆောင်းပါးထောင်ပေါင်းများစွာအတွက် ပေးစွမ်းနိုင်သောကြောင့် အလွန်နက်နဲမှုမရှိဘဲ ဖြစ်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံး၊
အီလက်ထရွန်းနစ် ဆားကစ်တစ်ခု ဖန်တီးရန် လိုအပ်သော အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါ။
ဒီဇိုင်းအဖွဲ့သည် ချစ်ပ်ရှိသင့်သည့် အင်္ဂါရပ်များနှင့် သတ်မှတ်ချက်များကို ဖော်ပြရန် တာဝန်ရှိသည်။
ထို့နောက်၊ ဒီဇိုင်းသည် logic gates နှင့် အခြားသော memory အစိတ်အပိုင်းများ စသည်တို့ကို စတင်အသုံးပြုမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဤချစ်ပ်ကို ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသည့် လုပ်ဆောင်ချက်ကို တိုးတက်စေမည့် လော့ဂျစ်ဒီဇိုင်းတစ်ခု မအောင်မြင်မီအထိ၊
၎င်းပြီးနောက်၊ ၎င်းသည် ယုတ္တိဗေဒအဆင့်တွင် မှန်ကန်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ရန် စမ်းသပ်မှုများနှင့် သရုပ်ဖော်မှုများကြားမှ အဆင့်များစွာကို ဖြတ်သန်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ပြုလုပ်ခြင်းရှိမရှိ သိရှိနိုင်ရန် စမ်းသပ်ချစ်ပ်များကိုပင် ထုတ်လုပ်ထားသည်။
ဒီဇိုင်းအဆင့်ပြီးသည်နှင့်၊ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ဆားကစ်၏ အပြင်အဆင်မှ ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် မျက်နှာဖုံးများ စီးရီးများကို ဖန်တီးသည်။ ဆီလီကွန်ပေါ်တွင် ရေးထွင်းနိုင်စေရန် ၎င်းတို့ပေါ်တွင် ပုံစံတစ်ခုကို ရေးထွင်းထားသည်။
ဆီမီးကွန်ဒတ်တာ wafer တွင် ပေါင်းစပ်ဆားကစ်များကို ဖန်တီးရန် ဤပုံစံကို စက်ရုံ သို့မဟုတ် စက်ရုံမှ အသုံးပြုသည်။ ဤ wafer များတွင် များသောအားဖြင့် ချစ်ပ် 200 သို့မဟုတ် 300 အထိ ပါဝင်ပါသည်။
ဒါက ဒီဇိုင်းအဆင့်လောက်တော့ ရှိတယ်။ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဘက်ကျနော်တို့ရှိသည်:
ဆီလီကွန်သတ္တုဓာတ်ကို သဲ သို့မဟုတ် quartz မှ ရရှိသည်။
၎င်းကို အလွန်သန့်စင်သော သို့မဟုတ် EGS (Electronic-Grade Silicon) အဖြစ် သန့်စင်ပြီးသည်နှင့် အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုသည့် ဆီလီကွန်ထက် သန့်စင်မှုအဆင့် ပိုမိုမြင့်မားသည်။
ဤ EGS သည် သစ်တုံးအတွင်း အရည်ပျော်ပြီး Czochralski နည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ ကြီးထွားရန် အစေ့ပုံဆောင်ခဲဖြင့် ပြုလုပ်သည့် စက်ရုံတွင် အပိုင်းပိုင်းပုံစံဖြင့် ရောက်ရှိသည်။ လွယ်လွယ်ကူကူ နားလည်နိုင်စေရန်၊ ပွဲတော်များတွင် ပုံမှန်ချည်သကြားလုံးပြုလုပ်ပုံနှင့် ဆင်တူသည်၊ သင်သည် တုတ် (အစေ့ပုံဆောင်ခဲ) နှင့် ဝါဂွမ်း (သွန်းသော ဆီလီကွန်) ချောင်းများကို မိတ်ဆက်ပြီး ထုထည်တိုးလာစေသည်။
ထိုအဆင့်၏အဆုံးတွင်၊ ရလဒ်သည် ဆလင်ဒါပုံသဏ္ဍာန်ရှိ monocrystalline silicon crystal ၏ကြီးမားသောအပိုင်းအစတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤဘားကို အလွန်ပါးလွှာသော wafer များအဖြစ် ဖြတ်ထားသည်။
ဤ wafer များသည် ထုတ်လုပ်မှုစတင်ရန်အတွက် ညစ်ညမ်းမှုမရှိစေရန် မျက်နှာပြင်ကို အရောင်တင်ရန် လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်သည်။
ထို့နောက်တွင်၊ ဤ wafer များသည် ၎င်းတို့ပေါ်ရှိ ချစ်ပ်များကို ဖန်တီးရန်အတွက် ထပ်တလဲလဲ လုပ်ငန်းစဉ်များစွာကို ဖြတ်သန်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်များသည် photolithography, etching သို့မဟုတ် etching, epitaxial growth, oxidation, ion implantation, etc.
နောက်ဆုံးအကြံမှာ အီလက်ထရွန်နစ် အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သော ယေဘုယျအားဖြင့် ထရန်စစ္စတာများကို wafer အလွှာပေါ်တွင် ဖန်တီးရန်ဖြစ်ပြီး အနိမ့်ဆုံးအလွှာတွင် logic gates များဖွဲ့စည်းရန် ပြောကြားထားသော အစိတ်အပိုင်းများကို အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် အလွှာများထည့်ကာ၊ ထို့နောက် အောက်ပါအလွှာများတွင် အဆိုပါဂိတ်များကို မူလယူနစ်များအဖြစ် ချိတ်ဆက်ထားပါသည် (adders၊ စာရင်းသွင်းမှုများ၊ ...)၊ အောက်ပါအလွှာများတွင် လုပ်ဆောင်နိုင်သော ယူနစ်များ (မမ်မိုရီ၊ ALU၊ FPU၊ ...) နှင့် နောက်ဆုံးတွင် ပြီးပြည့်စုံသော ဆားကစ်တစ်ခု၊ ဥပမာ၊ CPU တစ်ခုကို ဖန်တီးရန် အားလုံး အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ကြသည်။ အဆင့်မြင့် ချစ်ပ်တစ်ခုတွင် အလွှာ 20 အထိ ရှိနိုင်သည်။
ဤလုပ်ငန်းစဉ်များအားလုံးပြီးမြောက်ရန် လပေါင်းများစွာကြာနိုင်ပြီး၊ wafer တစ်ခုစီအတွက် ရာနှင့်ချီသော တူညီသောဆားကစ်များကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ခုကတော့ အဲဒါတွေကို စမ်းသပ်ပြီး ဖြတ်ရမှာပါ၊ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းတို့ကို ဆီလီကွန် ချစ်ပ်ပြားတစ်ခုစီအဖြစ် ပိုင်းခြားခြင်းဖြစ်သည်။
ယခုအခါ ၎င်းတို့သည် လျော့ရဲသေဆုံးသွားသည့်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ချစ်ပ်ကို ကာကွယ်ထားပြီး မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ လျှပ်ကူးလမ်းကြောင်းဖြစ်သော၊ ပေါင်းစပ်ပတ်လမ်း၏ ပင်နံပါတ်များဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် (DIP၊ SOIC၊ PGA၊ QFP၊ ...) ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါမည်။ .
ထင်ရှားသည်မှာ ပေါင်းစည်းထားသော ဆားကစ်အားလုံးသည် တူညီသည်မဟုတ်ပါ။. ဤတွင် ကျွန်ုပ်သည် CPU ကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်နိုင်သော ယူနစ်များနှင့် ပိုမိုရှုပ်ထွေးသည့်အရာများအကြောင်း ပြောခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း အလွန်ရိုးရှင်းသော ယုတ္တိတံခါး 555 ခုပါသည့်4timer သို့မဟုတ် IC ကဲ့သို့သော အလွန်ရိုးရှင်းသော ဆားကစ်များလည်း ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့တွင် အစိတ်အပိုင်း အနည်းငယ်မျှသာ ရှိမည်ဖြစ်ပြီး သတ္တု အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်မှု အလွှာတစ်ခု သို့မဟုတ် အနည်းငယ်ဖြင့် ချိတ်ဆက်သွားမည် ဖြစ်သည်။
တစ်မျိုးတည်းသာမဟုတ်၊ အများအပြားရှိသည်။ ပေါင်းစပ် circuit အမျိုးအစားများ. သင်တွေ့နိုင်သော အထင်ရှားဆုံးအရာများမှာ-
ဒစ်ဂျစ်တယ် ပေါင်းစပ်ဆားကစ်များ: ၎င်းတို့သည် အလွန်ရေပန်းစားပြီး ခေတ်မီစက်ပစ္စည်းများစွာ၊ ကွန်ပျူတာများ၊ မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းများ၊ စမတ်တီဗီများအထိ အသုံးပြုကြသည်။ ၎င်းတို့သည်0နှင့် 1 ဖြစ်သည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်အပေါ်အခြေခံ၍0နှင့် ဗို့အားနိမ့်အချက်ပြမှုနှင့် 1 မြင့်မားသောအချက်ပြမှုတို့နှင့်အတူ လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် လက္ခဏာရပ်များဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ ၎င်းတို့သည် အချက်အလက်များကို ကုဒ်ဝှက်ပြီး လုပ်ဆောင်ပုံဖြစ်သည်။ ဥပမာများသည် PLCs၊ FPGAs၊ Memories၊ CPU၊ GPU၊ MCU စသဖြင့် ဖြစ်နိုင်သည်။
analog: ဒွိအချက်ပြမှုများကို အခြေခံမည့်အစား၊ ဤအခြေအနေတွင် ၎င်းတို့သည် စဉ်ဆက်မပြတ် အချက်ပြမှုများဖြစ်သည်။ ဗို့အားတွင်ပြောင်းလွဲမှုများ. ယင်းကြောင့် ၎င်းတို့သည် စစ်ထုတ်ခြင်း၊ အချက်ပြချဲ့ထွင်ခြင်း၊ demodulation၊ modulation စသည်တို့ကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို အောင်မြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ မှန်ပါသည်၊ များစွာသောစနစ်များသည် analog နှင့် digital circuits နှစ်ခုလုံးဖြင့် အလုပ်လုပ်ကြပြီး အသုံးပြုကြသည်။ AD/DA converters များ. ၎င်းတို့ကို အုပ်စုကြီးနှစ်ခု၊ linear integrated circuit နှင့် radio frequency (RF) ဟူ၍ ခွဲခြားနိုင်သည်။ ဥပမာများသည် အသံစစ်ထုတ်ခြင်း၊ အသံချဲ့စက်များ၊ လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများ၊ အာရုံခံကိရိယာများ စသည်တို့အတွက် ထုတ်လွှတ်မှု သို့မဟုတ် ဧည့်ခံစနစ်များအတွက် ချစ်ပ်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။
ရောနှောထားသော အချက်ပြ IC များ: နာမည်အရတော့၊ သူတို့က နှစ်ခုလုံးရဲ့ ပေါင်းစပ်မှုပါ။ အချို့သောဥပမာများသည် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် analog-digital သို့မဟုတ် digital-analog converters၊ နာရီများ၊ timers၊ encoders/decoders စသည်တို့အတွက် အချို့သော ချစ်ပ်များ ဖြစ်နိုင်သည်။
ပေါင်းစည်းထားသော ဆားကစ်များသည် ပုံနှိပ်ဆားကစ်များနှင့် မရောထွေးသင့်ပါ။ သူတို့နှစ်ယောက်လုံးက မတူညီတဲ့အရာတွေပါ။ ယခင် microchips များကို ရည်ညွှန်းသော်လည်း၊ ပုံနှိပ်ဆားကစ်များ၊ သို့မဟုတ် PCB၎င်းတို့သည် ပိုကြီးသောပြားများပေါ်တွင် ရိုက်နှိပ်ထားသော အီလက်ထရွန်းနစ်ဆားကစ်များဖြစ်သည်။
အ ကွဲပြားခြားနားမှု အထင်ရှားဆုံးမှာ-
ပုံနှိပ်ထားသော ဆားကစ်များ: ၎င်းတို့ကို ကြေးနီလမ်းကြောင်းများကဲ့သို့ လျှပ်ကူးမျဉ်းပုံစံရှိသော ပန်းကန်ပြားဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး မတူညီသော ထည့်သွင်းထားသော အစိတ်အပိုင်းများ (capacitors၊ transistors၊ resistors၊ microchips၊ ...)၊ သံဖြူဂဟေဖြင့် ဂဟေဆော်ကာ၊ dielectric အပြင်၊ ချိတ်ဆက်ထားသော အလွှာများကို ပိုင်းခြားပေးသော ပစ္စည်း (အလွှာ)။ ၎င်းတို့သည် ပုံမှန်အားဖြင့် Non-surface Mount (SMD) အစိတ်အပိုင်းများအတွက် အပေါက်များ သို့မဟုတ် လမ်းကြောင်းများမှတဆင့်လည်း ရှိသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ၎င်းတို့တွင် အစိတ်အပိုင်းများကို ခွဲခြားသိရှိနိုင်စေရန်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလွယ်ကူစေရန်အတွက် ဒဏ္ဍာရီတစ်ခု၊ အမှတ်အသားများ၊ အက္ခရာများနှင့် နံပါတ်များ ရှိတတ်သည်။ ကြေးနီကို အလွယ်တကူ oxidizes ဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်၊ ၎င်းတို့တွင် မျက်နှာပြင် ကုသမှုများ ရှိတတ်သည်။ ပေါင်းစည်းထားသော ဆားကစ်များနှင့် မတူဘဲ၊ ၎င်းတို့ကို ပြုပြင်နိုင်ပြီး ပျက်စီးနေသော အစိတ်အပိုင်းများကို အစားထိုးခြင်း သို့မဟုတ် အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုများကို ပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။
ပေါင်းစပ်ပတ်လမ်းများ၎င်းတို့သည် အလွန်သေးငယ်ပြီး၊ ခိုင်မာသောအခြေအနေရှိကာ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ် နည်းပါးသည်။ PCB နှင့်မတူဘဲ၊ ၎င်းတို့၏ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုများသည် အလွန်သေးငယ်သောကြောင့် ၎င်းတို့ကို ပြုပြင်၍မရနိုင်ပါ။
ပေါင်းစည်းထားသော ဆားကစ်နှစ်ခုလုံးသည် ပုံနှိပ်ဆားကစ်များကို အစားထိုးခြင်းမဟုတ်သလို အပြန်အလှန်အားဖြင့်လည်း အစားထိုးခြင်းမဟုတ်ပါ။ နှစ်ခုစလုံးမှာ သူတို့ရဲ့ အသုံးပြုမှုတွေ ရှိပြီး အများစုကတော့ လက်တွေ့အသုံးချမှုမှာ အတူတူပါပဲ..။
နောက်ဆုံးတော့ အများကြီးရှိတယ်။ အလွန်ရေပန်းစားသော ပေါင်းစပ်ဆားကစ်များ ထိုကဲ့သို့သော လျှပ်စစ်ပရောဂျက်များအတွက် ဝန်ထမ်းများ၊ ယုတ္တိဗေဒဂိတ်. ၎င်းတို့သည် ဈေးသက်သာပြီး Amazon သို့မဟုတ် အထူးပြု အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများကဲ့သို့ စတိုးဆိုင်များတွင် အလွယ်တကူ ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဤသည်မှာ လူကြိုက်အများဆုံးအချို့ဖြစ်သည်-
Interstellar Electronics မှ နာမည်ကြီး IC အစုံအလင် 75 ခု
NAND လော့ဂျစ်ဂိတ် TTL ချစ်ပ် 40 ပါရှိသော DealMux အစုံ.
နာမည်ကြီး NE10 အချိန်တိုင်းကိရိယာ၏ IC 555 ခု.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ » အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများ » ပေါင်းစည်းထားသော ဆားကစ်များ- ၎င်းတို့သည် အဘယ်နည်း၊ ပုံနှိပ်စက်များနှင့် အခြားအရာများနှင့် ကွာခြားချက်များ
STEM - ပစ္စုပ္ပန်နှင့် အနာဂတ် ပညာရေး
DWG ကြည့်ရှုသူ- အကောင်းဆုံး အခမဲ့ကြည့်ရှုသူများ